မလုပ်မဖြစ် လုပ်ရတာနဲ့ စိတ်ပါဝင်စားလို့ လုပ်တာ – Gentleman Magazine
မလုပ်မဖြစ် လုပ်ရတာနဲ့ စိတ်ပါဝင်စားလို့ လုပ်တာ
သင် လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်အတွက် ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ဖူးတဲ့ အချိန်တစ်ခုကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ပြီးတော့ သင် လုပ်မှ ဖြစ်မှာမို့လို့ လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သင့်ရဲ့ အလုပ်ပြီးမြောက်နိုင်စွမ်းနဲ့ အကျိုးရှိမှု ကွာမနေပါဘူးလား?? အခု ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ အဲဒိအချိန်တွေတုန်းက စိတ်ခံစားချက်တွေကိုတောင် ပြန်ခံစားမိလာတယ် မဟုတ်ပါလား?? အဲဒိအချက်တွေကပဲ စိတ်ပါဝင်စားမှုကို အောင်မြင်မှု လမ်းကြောင်းအတွက် အရေးပါတဲ့ အချက်တစ်ခုဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးတာပါပဲ။
အလုပ်ခွင်မှာ အလုပ်ကို စိတ်အရမ်းပါလို့မဟုတ်ပဲ မလုပ်မဖြစ်ကြောင့်သာ လုပ်နေရသူတွေ များပါတယ်။ အဲဒိလို ပါတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာ တစ်ယောက်ထဲလုပ်လို့ မရလို့ အလုပ်ပြီးဖို့ အရေးကြီးတဲ့ တခြားသူတွေကို ဘယ်လို အလုပ်ထဲမှာ စိတ်ပါဝင်စားလာအောင် ပြုလုပ်ကြမလဲ??
မလုပ်မဖြစ် လုပ်ရတာနဲ့ စိတ်ပါဝင်စားလို့ လုပ်တာရဲ့ အဓိကကွာခြားချက်တွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
လူတွေဟာ ဒီအလုပ်ကို လုပ်ကို လုပ်မှ ရမှာမို့် လုပ်ရတာပါ။
အဲဒါကို လိုအပ်တဲ့ အခါတွေကတော့
– ဆွေးနွေးငြင်းခုံနေဖို့ အချိန် မရှိတဲ့အခါမှာ
– တခြား ရွေးချယ်စရာ မရှိတဲ့အခါ
– သင် တစ်ယောက်ထဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ ရနေတဲ့အခါ
လုံခြုံရေးအတွက် လုပ်ရပ်တွေဟာ တာဝန်အရ ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ သူများတွေကို ဖမ်းချုပ်ရတာ ပျော်နေလို့ မရပါဘူး။
လူတွေက ဒီအလုပ်ကို လုပ်ချင်လို့ကို လုပ်တာပါ။
အဲဒါကို လိုအပ်တဲ့ အချိန်တွေကတော့
– နောက်ခံ အကူအညီပေးသူ များများ လိုတဲ့အခါ
– အခြေအနေကို သေချာ မသိသေးတဲ့အခါ
– အဖြေက ကြာရှည်ခံတဲ့ အဖြေဖြစ်မှ ရမယ့်အခါ
ကုန်ပစ္စည်း အသစ် မိတ်ဆက်တာ၊ ဝန်ဆောင်မှုအသစ်၊ အစီအစဉ် အသစ်ကို အမှားမပါပဲ အချိန်နဲ့ တပြေးညီ ဝန်ဆောင်မှု ပေးချင်တဲ့ အခါမျိုးတွေဟာ စိတ်ပါဝင်စားမှုကို အရေးတကြီး လိုအပ်နေတာပါ။
အလုပ်ခွင်မှာ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်အပေါ် စိတ်ပါဝင်စားစေချင်တဲ့ လူအုပ်စု နှစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးသူနဲ့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ တူတူ အလုပ်လုပ်သူတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးသူတွေကို အလုပ်ထဲကို စိတ်ပါဝင်စားစေဖို့ သူ့ကို အလကား အလုပ်လုပ်ပေးတဲ့ ဗော်လန်တီယာတစ်ယောက်လို သဘောထားပြီး ဆက်ဆံပါ။ တစ်ကယ်လို့ သင့်ရဲ့ ရာထူးအာဏာကို မသုံးရပဲ သူ့ကို အလုပ်ပေးနိုင်ပြီဆိုရင် သူ့ရဲ့ စိတ်ပါဝင်စားမှုဟာ အမှန်အကန်ပါ။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ပါဝင်စားမှုကို ရနိုင်တဲ့ အခြေအနေ ၃ မျိုး ရှိပါတယ်။
၁. ဒီ ပရောဂျက်ရဲ့ ပန်းတိုင်ဟာ အဲဒိလူကို စိတ်လှုပ်ရှားစေနိုင်တဲ့ အရာ တစ်ခုခု ဖြစ်နေရင်။
၂. ပရောဂျက်ရဲ့ ပန်းတိုင်နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး သူဖြစ်စေချင်တဲ့ အရာ တစ်ခုခုကို ထည့်သွင်းခွင့် ပေးထားရင်။
၃. တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဆက်သွယ်မှုရှိရင်၊ အဲဒိလူက နားထောင်တတ်ရင်။
အဲဒိ အခြေအနေတွေကို ဖန်တီးပေးဖို့က ပရောဂျက် ခေါင်းဆောင်ရဲ့ တာဝန်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အိုင်ဒီယာ အသစ်တစ်ခုကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကို ချပြဖို့ဆိုရင် မချပြခင် ကျွန်တော်တို့ သေသေချာချာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်သွားမှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခွင့်အရေးက တစ်ကြိမ်ပဲ ရမှာမို့ပါ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့လဲ တူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ အချိန်တွေ စွမ်းအားတွေကို မြှုပ်နှံရမှာ မို့လို့ပါ။ ဘယ်လို သူတို့ကို စိတ်ပါလာအောင် ဆွဲဆောင်ရမလဲ??
ကျွန်တော်တို့ဟာ ပရောဂျက်တစ်ခုရဲ့ ပထမအကြိမ်မှာတော့ လူတွေကို တက်ကြွလာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒိအခေါက် သူတို့ ကြိုးစားအပြီးမှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု မရဘူးဆိုရင် သူတို့ကို နောက်တစ်ခေါက် တက်ကြွလာအောင် လုပ်ဖို့ ခက်ခဲသွားပါပြီ။
အဲဒိအခါမျိုးမှာ ခေါင်းဆောင်ဟာ အမှန်တရားကို ဖွင့်ပြောရပါမယ်။ အခြေအနေကို ရောချသွားမယ့်အစား၊ အသေးချုံ့ပစ်မဲ့အစား ပြသနာ တစ်ခု ရှိနေတယ်ဆိုတာ ဝန်ခံရပါ့မယ်။ လူတွေကို အဲဒိပြသနာဖြေရှင်းဖို့ ဘယ်လို အစီအစဉ် ရှိတယ်ဆိုတာ ပြောပြပြီး မျှော်လင့်ချက်လေး ပေးထားလိုက်ပါ။
ကိုယ့်ဘာသာ အလုပ် မလုပ်ချင်တဲ့ အခါမျိုးမှာ စိတ်ပါဝင်စားအောင် ပြုလုပ်ခြင်း
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကျွန်တော်တို့ကို ကောင်းကောင်း အဆက်ဆံ မခံရတဲ့ နေရာမျိုးတွေမှာ အလုပ်ရနေတတ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် Boss ဆိုးဆိုးတွေ လက်အောက်မှာ အလုပ်လုပ်နေရတာမျိုး ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အဲဒိတော့ အလုပ်မှာ စိတ်မဝင်စားတာ အဆန်း မဟုတ်တော့ပါဘူး။
အဲလို အချိန်မျိုးကြုံရရင် အခုလို တွေးကြည့်လိုက်ပါ။ အခုချိန်မှာ မန်နေဂျာ ဖြစ်နေသူတွေဟာ အရင်က သူဋ္ဌေး ခပ်ဆိုးဆိုး လက်အောက်မှာ နေခဲ့ရတဲ့ သူတွေချည်းပါပဲ။ တစ်နေ့တော့ အခြေအနေတွေ ပြောင်းလဲသွားမှာပါ။ သူဋ္ဌေး ပြောင်းသွားမှာပါ။ သင် ရာထူးတိုးသွားမှာပါ။ အဲဒိလို သင့်ဘာသာ မျှော်လင့်ချက် ပေးလိုက်ရင် အားတက်လာပါလိမ့်မယ်။ အားတက်လာရင် အလုပ်ကို စိတ်ဝင်တစား လုပ်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်။
အဲဒိလိုမျိုး သူဋ္ဌေး ခပ်ဆိုးဆိုးတွေဆီကတောင် သင် လေ့လာနိုင်တာ ရှိပါသေးတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေကို ဘယ်လို မအုပ်ချုပ်ရဘူးလဲ ဆိုတာပါပဲ။
သငျ လုပျနရေတဲ့ အလုပျအတှကျ ရငျခုနျ စိတျလှုပျရှားနခေဲ့ဖူးတဲ့ အခြိနျတဈခုကို ပွနျစဉျးစားကွညျ့ပါ။ ပွီးတော့ သငျ လုပျမှ ဖွဈမှာမို့လို့ လုပျနရေတဲ့ အလုပျတဈခုကို ပွနျစဉျးစားကွညျ့ပါ။ သငျ့ရဲ့ အလုပျပွီးမွောကျနိုငျစှမျးနဲ့ အကြိုးရှိမှု ကှာမနပေါဘူးလား?? အခု ပွနျစဉျးစားကွညျ့လိုကျရုံနဲ့ အဲဒိအခြိနျတှတေုနျးက စိတျခံစားခကျြတှကေိုတောငျ ပွနျခံစားမိလာတယျ မဟုတျပါလား?? အဲဒိအခကျြတှကေပဲ စိတျပါဝငျစားမှုကို အောငျမွငျမှု လမျးကွောငျးအတှကျ အရေးပါတဲ့ အခကျြတဈခုဖွဈအောငျ ပွုလုပျပေးတာပါပဲ။
အလုပျခှငျမှာ အလုပျကို စိတျအရမျးပါလို့မဟုတျပဲ မလုပျမဖွဈကွောငျ့သာ လုပျနရေသူတှေ မြားပါတယျ။ အဲဒိလို ပါတျဝနျးကငျြမြိုးမှာ တဈယောကျထဲလုပျလို့ မရလို့ အလုပျပွီးဖို့ အရေးကွီးတဲ့ တခွားသူတှကေို ဘယျလို အလုပျထဲမှာ စိတျပါဝငျစားလာအောငျ ပွုလုပျကွမလဲ??
မလုပျမဖွဈ လုပျရတာနဲ့ စိတျပါဝငျစားလို့ လုပျတာရဲ့ အဓိကကှာခွားခကျြတှကေို အောကျမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။
လူတှဟော ဒီအလုပျကို လုပျကို လုပျမှ ရမှာမျို့ လုပျရတာပါ။
အဲဒါကို လိုအပျတဲ့ အခါတှကေတော့
– ဆှေးနှေးငွငျးခုံနဖေို့ အခြိနျ မရှိတဲ့အခါမှာ
– တခွား ရှေးခယျြစရာ မရှိတဲ့အခါ
– သငျ တဈယောကျထဲ ဆုံးဖွတျခကျြခလြို့ ရနတေဲ့အခါ
လုံခွုံရေးအတှကျ လုပျရပျတှဟော တာဝနျအရ ဖွဈဖို့လိုပါတယျ။ သူမြားတှကေို ဖမျးခြုပျရတာ ပြျောနလေို့ မရပါဘူး။
လူတှကေ ဒီအလုပျကို လုပျခငျြလို့ကို လုပျတာပါ။
အဲဒါကို လိုအပျတဲ့ အခြိနျတှကေတော့
– နောကျခံ အကူအညီပေးသူ မြားမြား လိုတဲ့အခါ
– အခွအေနကေို သခြော မသိသေးတဲ့အခါ
– အဖွကေ ကွာရှညျခံတဲ့ အဖွဖွေဈမှ ရမယျ့အခါ
ကုနျပစ်စညျး အသဈ မိတျဆကျတာ၊ ဝနျဆောငျမှုအသဈ၊ အစီအစဉျ အသဈကို အမှားမပါပဲ အခြိနျနဲ့ တပွေးညီ ဝနျဆောငျမှု ပေးခငျြတဲ့ အခါမြိုးတှဟော စိတျပါဝငျစားမှုကို အရေးတကွီး လိုအပျနတောပါ။
အလုပျခှငျမှာ ကြှနျတျောတို့ အလုပျအပျေါ စိတျပါဝငျစားစခေငျြတဲ့ လူအုပျစု နှဈခုကတော့ ကြှနျတျောတို့အတှကျ အလုပျလုပျပေးသူနဲ့ ကြှနျတျောတို့နဲ့ တူတူ အလုပျလုပျသူတို့ ဖွဈပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့အတှကျ အလုပျလုပျပေးသူတှကေို အလုပျထဲကို စိတျပါဝငျစားစဖေို့ သူ့ကို အလကား အလုပျလုပျပေးတဲ့ ဗျောလနျတီယာတဈယောကျလို သဘောထားပွီး ဆကျဆံပါ။ တဈကယျလို့ သငျ့ရဲ့ ရာထူးအာဏာကို မသုံးရပဲ သူ့ကို အလုပျပေးနိုငျပွီဆိုရငျ သူ့ရဲ့ စိတျပါဝငျစားမှုဟာ အမှနျအကနျပါ။
လူတဈယောကျရဲ့ စိတျပါဝငျစားမှုကို ရနိုငျတဲ့ အခွအေနေ ၃ မြိုး ရှိပါတယျ။
၁. ဒီ ပရောဂကျြရဲ့ ပနျးတိုငျဟာ အဲဒိလူကို စိတျလှုပျရှားစနေိုငျတဲ့ အရာ တဈခုခု ဖွဈနရေငျ။
၂. ပရောဂကျြရဲ့ ပနျးတိုငျနဲ့ ပါတျသတျပွီး သူဖွဈစခေငျြတဲ့ အရာ တဈခုခုကို ထညျ့သှငျးခှငျ့ ပေးထားရငျ။
၃. တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ဆကျသှယျမှုရှိရငျ၊ အဲဒိလူက နားထောငျတတျရငျ။
အဲဒိ အခွအေနတှေကေို ဖနျတီးပေးဖို့က ပရောဂကျြ ခေါငျးဆောငျရဲ့ တာဝနျပါ။
ကြှနျတျောတို့ရဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျး အိုငျဒီယာ အသဈတဈခုကို ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူတှကေို ခပြွဖို့ဆိုရငျ မခပြွခငျ ကြှနျတျောတို့ သသေခြောခြာ ကွိုတငျပွငျဆငျသှားမှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခှငျ့အရေးက တဈကွိမျပဲ ရမှာမို့ပါ။ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှနေဲ့လဲ တူတူပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ အခြိနျတှေ စှမျးအားတှကေို မွှုပျနှံရမှာ မို့လို့ပါ။ ဘယျလို သူတို့ကို စိတျပါလာအောငျ ဆှဲဆောငျရမလဲ??
ကြှနျတျောတို့ဟာ ပရောဂကျြတဈခုရဲ့ ပထမအကွိမျမှာတော့ လူတှကေို တကျကွှလာအောငျ လုပျဆောငျနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒိအခေါကျ သူတို့ ကွိုးစားအပွီးမှာ သိသာထငျရှားတဲ့ အကြိုးသကျရောကျမှု မရဘူးဆိုရငျ သူတို့ကို နောကျတဈခေါကျ တကျကွှလာအောငျ လုပျဖို့ ခကျခဲသှားပါပွီ။
အဲဒိအခါမြိုးမှာ ခေါငျးဆောငျဟာ အမှနျတရားကို ဖှငျ့ပွောရပါမယျ။ အခွအေနကေို ရောခသြှားမယျ့အစား၊ အသေးခြုံ့ပဈမဲ့အစား ပွသနာ တဈခု ရှိနတေယျဆိုတာ ဝနျခံရပါ့မယျ။ လူတှကေို အဲဒိပွသနာဖွရှေငျးဖို့ ဘယျလို အစီအစဉျ ရှိတယျဆိုတာ ပွောပွပွီး မြှျောလငျ့ခကျြလေး ပေးထားလိုကျပါ။
ကိုယျ့ဘာသာ အလုပျ မလုပျခငျြတဲ့ အခါမြိုးမှာ စိတျပါဝငျစားအောငျ ပွုလုပျခွငျး
တဈခါတဈလမှော ကြှနျတျောတို့ကို ကောငျးကောငျး အဆကျဆံ မခံရတဲ့ နရောမြိုးတှမှော အလုပျရနတေတျပါတယျ။ ဒါမှမဟုတျ Boss ဆိုးဆိုးတှေ လကျအောကျမှာ အလုပျလုပျနရေတာမြိုး ကွုံရတတျပါတယျ။ အဲဒိတော့ အလုပျမှာ စိတျမဝငျစားတာ အဆနျး မဟုတျတော့ပါဘူး။
အဲလို အခြိနျမြိုးကွုံရရငျ အခုလို တှေးကွညျ့လိုကျပါ။ အခုခြိနျမှာ မနျနဂြော ဖွဈနသေူတှဟော အရငျက သူဋ်ဌေး ခပျဆိုးဆိုး လကျအောကျမှာ နခေဲ့ရတဲ့ သူတှခေညျြးပါပဲ။ တဈနတေ့ော့ အခွအေနတှေေ ပွောငျးလဲသှားမှာပါ။ သူဋ်ဌေး ပွောငျးသှားမှာပါ။ သငျ ရာထူးတိုးသှားမှာပါ။ အဲဒိလို သငျ့ဘာသာ မြှျောလငျ့ခကျြ ပေးလိုကျရငျ အားတကျလာပါလိမျ့မယျ။ အားတကျလာရငျ အလုပျကို စိတျဝငျတစား လုပျနိုငျလာပါလိမျ့မယျ။
အဲဒိလိုမြိုး သူဋ်ဌေး ခပျဆိုးဆိုးတှဆေီကတောငျ သငျ လလေ့ာနိုငျတာ ရှိပါသေးတယျ။ ဝနျထမျးတှကေို ဘယျလို မအုပျခြုပျရဘူးလဲ ဆိုတာပါပဲ။
Previous: သင့်ကို ဝစေတဲ့ အမှား ၆ မျိုး
Next: မိန်းမတွေ လက်ခံထားတဲ့ ရင်သားတွေအကြောင်း လျှို့ဝှက်ချက် လေးသွယ်